Indlela eyadala ngayo indlela yokuziphatha evuselelwe ngayo kumaxesha adlulileyo
"Ukuziphatha okulungileyo" kuchaza indlela ethile yefilosofi kwimibandela malunga nokuziphatha. Yindlela yokucinga ngemilinganiselo ephawulekayo izafilosofi zamaGrike namaRoma, ngakumbi uSocrates , uPlato , noAristotle. Kodwa uye wathandwa kwakhona ukususela kwinqanaba elongezelelweyo le-20 leminyaka ngenxa yomsebenzi wabacebisi abafana no-Elizabeth Anscombe, uFilia Foot kunye no-Alasdair MacIntyre.
Umbuzo oMbindi weNkcubeko
Ndifanele ndiphile njani?
Le nto ibango elifanelekileyo lokuba ngumbuzo oyimfuneko ongayifaka. Kodwa kuthetha ifilosofi, kukho omnye umbuzo othi mhlawumbi ufanele uphendulwe kuqala: oku, Ndifanele ndenze isigqibo sokuba njani ndingahlala?
Kukho iimpendulo eziliqela ezikhoyo kwiNtsholongwane yefilosofi:
Impendulo yonqulo: UThixo usinike imigaqo emiselweyo. Ezi zichazwe kwisibhalo (isib. IBhayibhile yesiHebhere, iTestamente eNtsha, iKoran). Indlela efanelekileyo yokuphila kukulandela le mithetho. Ubomi obulungileyo bomntu.
Utilitarianism: Le yembono yokuba izinto ezibaluleke kakhulu kwihlabathi ekukhuthazeni ulonwabo nokukhusela ukuhlupheka. Ngoko indlela efanelekileyo yokuphila, ngokweendlela eziqhelekileyo, ukuzama ukukhuthaza ulonwabo olunakho, kokubakho kunye nolwabanye abantu-ngakumbi abo bajikelezayo-ngelixa bezama ukuphepha ukubangela intlungu okanye ukungonwabi.
Imilinganiselo yamaKantian: Isifilosofi esikhulu saseJamani u- mmanuel Kant sichaza ukuba umgaqo osisiseko esimele siwulandele awuyi "ukuthobela imithetho kaThixo" okanye "Ukukhuthaza ulonwabo." Kunoko, wathi umgaqo-siseko wendlela yokuziphatha uyinto enje: Yenza njalo indlela onokunyaniseka ukuba umntu ayenze ukuba ayenze ukuba ayenziimeko ezifanayo. Nabani na ohlala kulo mgaqo, uthi, uya kuba nokuziphatha ngokugqibeleleyo kunye nokuqonda, kwaye baya kukwenza okulungileyo.
Ziziphi iindlela ezintathu ezifana ngazo kukuba zijonga ukuziphatha njengento yokulandela imithetho ethile. Kukho imimiselo eqhelekileyo, imigaqo ebalulekileyo, njengokuthi "Phatha abanye njengokuba ungathanda ukuphathwa," okanye "Khuthaza uvuyo." Kwaye kukho imithetho emininzi enokuthi ichithwe kule miqathango jikelele: umzekelo "Musa kuthwala ubungqina bobuxoki, "okanye" Ncedisa abahluphekileyo. "Ubomi obuhle ngokuziphatha buhlala ngokuvumelana nale migaqo; Ukungalunganga kwenzeka xa imithetho iphukile.
Ugxininiso kumsebenzi, uxanduva, kunye nokuchaneka kwezenzo.
Indlela uPlato noAristotle yokucinga ngayo ngokuziphatha kwakuye kugxininiswa okuhlukile. Babuza bathi: "Umntu kufanele aphile njani?" Kodwa wuthatha lo mbuzo ukuba ulingane "Uhlobo luni lomntu ofuna ukuba nalo?" Nguwo, uluphi uhlobo lweempawu kunye neempawu zobuntu ezinomdla kwaye ezinqwenelekayo. Yiyiphi into ekumele ihlalwe ngayo thina nakwabanye? Ziziphi iimpawu esifanele sizifune ukuzisusa?
I-Akhawunti ye-Aristotle yeNtshontsho
Ngomsebenzi wakhe omkhulu, i- Nicomachean Ethics , u-Aristotle unikeza uhlalutyo olunzulu lwezakhono eziye zaphazamiseka kakhulu kwaye kukuqala kweengxoxo ezininzi zokuziphatha ezintle.
Igama lesiGrike elisoloko liguqulelwa ngokuthi "ubuhle" liyilo. Ukuthetha ngokuqhelekileyo, u- arête luhlobo lobugqwesileyo. Yimfanelo eyenza into eyenza injongo yayo isebenze. Udidi lokugqwesa kumbuzo lungabhekisela kwiintlobo ezithile zezinto. Ngokomzekelo, ubuchule obuphambili bomkhonto womjaho kukukhawuleza; ubuchule obuphambili bommese bubukhali. Abantu abaqhuba imisebenzi ethile bafuna izicwangciso ezithile: umz ijoni limele libe nesibindi.
Kodwa kukho izinto ezintle ukuba kulungile ukuba umntu abe nelifa, iimpawu ezibenza bakwazi ukuphila ubomi obuhle kwaye baphumelele njengomntu. Ekubeni u-Aristotle ucinga ukuba into eyahlula abantu kuzo zonke ezinye izilwanyana kukuba sisengqiqo, ubomi obulungileyo bomntu luyinto enye ekusebenziseni ngayo amagunya okuqonda. Ezi zibandakanya izinto ezifana nobuchule bobuhlobo, ukuthatha inxaxheba koluntu, ukuzonwabisa kwenzululwazi kunye nophando lwengqondo. Ngaloo ndlela ku-Aristotle, ubomi bendlela yokufuna izitatata ezifuna ukuzonwabisa ayikho umzekelo wobomi obuhle.
U-Aristotle uqhathanisa phakathi kwezinto zobugcisa, eziqhutyelwa kwinkqubo yokucinga, kunye nemilinganiselo yokuziphatha, eyenziwa ngokusebenza. Ukhawuleza ubuhle bokuziphatha njengendlela yokuziphatha okulungileyo ukuba anakho kunye nokuba umntu ubonisa ukuziphatha.
Le ngongoma yokugqibela malunga nokuziphatha komsebenzi kubalulekile. Umntu onomusa nguye ohlala enesisa, kungekhona nje ukupha abanye. Umntu ogcina kuphela ezinye zezithembiso zakhe akanalo ubuchule bokuthembeka. Ukuba neyona nto imnandi kukuba ibe yinto enzulu ebomini bakho. Enye indlela yokufezekisa le nto kukuqhubeka nokuqhuba ubuchule ukuze kube yinto eqhelekileyo. Ngaloo ndlela ukuba ube ngumntu onomusa ngokwenene kufuneka uqhubeke wenza izenzo zokwenza ububele kuze kube yinto ebonisa ukuba nobubele nje ngokuza ngokwakho kwaye kulula; kuba, njengokutsho komnye, "uhlobo lwesibini."
U-Aristotle uthi iimeko zonke zokuziphatha zithetha phakathi kokubini. Omnye ogqithiseleyo kubandakanya ukungabikho kobuhle obunombuzo, enye into echaphazelekayo ibandakanya ukuthatha indawo engaphezulu. Umzekelo, "Inkokheli encinane = inkathazo; inkani kakhulu = ukungabi nantoni. Ukunceda okuncinane = ukuxhamla; ukuphana okukhulu = ukugqithisa." Le yimfundiso edumileyo "yegolide intetho." "Intsingiselo," njengoko uAristotle eqonda ukuba ayilona uhlobo oluthile lweemathematika phakathi kwezinto ezimbini ezigqithiseleyo; kunoko, yinto efanelekileyo kwiimeko. Enyanisweni, i-aristotle ingxabano ibonakala kukuba nayiphi na impawu esicinga ngayo ububele bokusetyenziswa ngobulumko.
Ubulumko obusebenzayo (igama lesiGrike elithi phronesis ), nangona lithetha ngokugqithiseleyo ubuhle beengqondo, buya kuba yinto ebalulekileyo yokuba ngumntu olungileyo nokuphila ubomi obuhle. Ukuba nobulumko obusebenzayo kuthetha ukukwazi ukuvavanya oko kuyimfuneko nakweyiphi na imeko.
Oku kubandakanya ukwazi ukuba ubani kufuneka alandele umgaqo kwaye xa umntu ephule. Yaye ibiza ukuba kudlalwa ulwazi, amava, ukuvakalelwa kwengqondo, ukuqonda, nokuqiqa.
Iingenelelo zoBungqina beNkcazo
Ngokuqinisekileyo, ukuziphatha okunyanisekileyo akuzange kufe emva kukaAristotle. Ama-Stoics aseRoma afana noSeneca noMarcus Aurelius nabo bagxininise kumlingani kunemigaqo engabonakaliyo. Kwaye nabo babona ubuhle bokuziphatha njengomsebenzi wobomi obuhle-oko kukuthi, ukuba ngumntu onobuhle uyisithako esibalulekileyo sokuphila kakuhle kwaye uyavuya. Akukho mntu ongenalo ububele angaphila kakuhle, nokuba ngaba banobutyebi, amandla kunye nokuzonwabisa okuninzi. Kamva iingcamango ezifana noTomas Aquinas (1225-1274) noDavid Hume (1711-1776) nazo zanikeza iifilosofi zokuziphatha apho ubuchule budlala indima ebalulekileyo. Kodwa kulungile ukutsho ukuba ukuziphatha okusemandleni kwathatha isihlalo salo emva kwekhulu lama-19 neye-20.
Ukuvuselelwa kokuziphatha okulungileyo phakathi kwexesha lama-20 leminyaka kwakunokunganeliseki ngokuziphatha okujoliswe kumgaqo-nkqubo, kunye nokwazisa okuqhubekayo kwezinye zeenzuzo ze-Aristoteli. Ezi nzuzo zibandakanya oku kulandelayo.
Iimpawu zokuziphatha ezintle zibonelela ngokubanzi umgaqo wokuziphatha ngokubanzi. Ayiboni ifilosofi yokuziphatha njengoko ivaliwe ekusebenzeni ukuba zeziphi izenzo ezichanekileyo kwaye zeziphi izenzo ezingalunganga. Kwakhona kubuza ukuba yintoni inobomi okanye ukukhula komntu. Singaba nomsebenzi wokunyuka ngendlela esinomsebenzi wokungabulali; kodwa imibuzo malunga nenhlalakahle kusekho imibuzo esemthethweni malunga neengcali zefilosofi zokuziphatha.
Iphepha ukuthintela ukuziphatha okujoliswe kumgaqo-nkqubo. Ngokomzekelo kaKant, umzekelo, kufuneka sihlale siphantsi kwaye kwiimeko zonke sizithobela umgaqo-siseko wakhe wokuziphatha, "ulungelelaniso lwakhe." Oku kuye kwabangela ukuba umntu akaze athethe amanga okanye aphule isithembiso. Kodwa umntu ozilumko ngokuchanekileyo nguye oya kuqonda xa ikhondo elona lifanelekileyo lokuphula imithetho eqhelekileyo. Iimpawu zokuziphatha ezintle zibonelela ngemigangatho yesithupha, kungekhona isinyithi.
Ngenxa yokuba ibandakanyeka kumlingani, unjani uhlobo lomntu, ukuziphatha okulungileyo kukunikela ingqalelo kwiimeko zethu zangaphakathi kunye neemvakalelo ngokuchasene nokugxila kwizenzo. Ukusebenzisa umsebenzisi, into ebalulekileyo kukuba wenza okulungileyo-oko kukuthi, ukhuthaza ulonwabo olukhulu kwinani elikhulu (okanye ulandele umgaqo ochanekileyo ngale njongo). Kodwa njengokuba kunjalo, oku akusiyo yonke into esinendaba ngayo. Kubalulekile ukuba umntu anike ububele okanye ancede okanye anyanisekile. Umntu onyanisekileyo ngenxa yokuba bacinga ukunyaniseka kwintsebenziswano yabo yinto engathandekiyo ukuba umntu onyanisekileyo kwaye angayikhohlisi umthengi nokuba ngaba unokuqiniseka ukuba akukho mntu uya kuzifumana.
Iimpawu zokuziphatha ezintle zibuye zavula umnyango kwezinye iindlela zokufunda kunye nolwazi oluphawulwa ngabacingeli besifazane abachasayo ukuba ifilosofi yokuziphatha yenkcubeko iye yagxininisa imigaqo engabonakaliyo malunga nobudlelwano bobudlelwane phakathi kwabantu. Ubundlobongela bokuqala phakathi koomama nomntwana, ngokomzekelo, kungaba yinto ebalulekileyo yokwakha ubomi, ukubonelela ngamava kunye nomzekelo wokunyamekela ngomnye umntu.
Ukuchasa kwiiNkcazo zoBungqina
Akufuneki ukuthetha, ukuziphatha okulungileyo kunabo bahlalutyi. Nazi ezinye ezimbalwa ezigxekayo ezichasene nazo.
"Ndingayinceda njani?" Ngokwenene yindlela ekhethekileyo yokubuza "Yintoni eya kundenza ndivuyiswe?" Le nto ingaba ngumbuzo onokuqiqa ukubuza, kodwa umbuzo ongeyena umbuzo. Umbuzo malunga nomdla wakho. Noko ke, ukuziphatha ngokwemigaqo, ngokuphathelele ukuphatha abanye abantu. Ngoko ukwandiswa kwemilinganiselo yokubandakanya imibuzo malunga nokuphucula kuthatha imfundiso yokuziphatha ngaphandle kokukhathazeka kwayo.
Ukuziphatha ngokuzikhethela ngokwabo akunakunceda ukuphendula nayiphi na inkinga yokuziphatha. Ayinayo izixhobo zokwenza oku. Masithi unokwenza isigqibo sokuba okanye ungathethi amanga ukuze ugcine umhlobo wakho engadli. Ezinye iingcamango zokuziphatha zinika inkolelo yangempela. Kodwa imilinganiselo yokuziphatha ayikho. Ithi nje, "Yenza into enomntu onobulumko" eya kuyenza.
Ukuziphatha kukukhathazeka, phakathi kwezinye izinto, ngokudumisa nokugxeka abantu ngendlela abaziphatha ngayo. Kodwa luhlobo luni lomntu umntu analo lukhulu kumbandela omkhulu. Abantu banesimo sengqondo: okanye abanesibindi okanye abanamahloni, abanomdla okanye abagcinayo, abanokuzithemba okanye abaqaphele. Kulukhuni ukuguqula le miqobo engenazalwa. Ukongezelela, iimeko apho umntu ephakanyiswa khona yinto ebangela ukuziphatha kwabo kodwa engaphaya kwayo. Ngoko ukuziphatha okulungileyo kubakhokelela ekudumiseni nasekutshutshiseni abantu ngenxa yokuba nethamsanqa.
Ngokwemvelo, i-virtue ethicists ikholelwa ukuba iyakwazi ukuphendula ezi zichaso. Kodwa ngaba abagxeki abababeka phambili bayavuma ukuba ukuvuselelwa kobuhle bokwenziwa kwimihla yakutshanje kuye kwandisa ifilosofi yokuziphatha kwaye kwandisa ububanzi bayo ngendlela ephilileyo.
I-Dire Dire Straits Iingoma zee-80s
Buyisela iMilinganiselo emininzi esuka kwiDafa yeSebenzi
Indlela yokuGrafu kwaye ufunde ukuPhumela kweZithuba zeFrontier
Uluphi uhlobo lwe-Safest Type of Bottle Water?
Inyikima Inyoni (iPhorusrhacos)